यस्तो दाग देखिए बो’क्सिले चुसेको भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ ? यस्ता हुनसक्छन् कारणहरु - ramechhapkhabar.com
कहिलेकाहिँ विहान उठ्दा तपाईंको शरीरमा निलो दाग-धब्बा देखिन्छ ? यस्तो दागदब्बालाई हाम्रो नेपाली समाजमा बो’क्सीले चु’सेको (टो’केको) भन्ने गरिन्छ।खासगरेर महिलाको खुट्टा र पाखुरामा यस्तो दाग देखियो भने बो’क्सीले चु’सेको भन्ने गरिन्छ। तर, यसमा कुनै सत्यता हुँदैन।
यदि तपाईंको शरीरमा पनि निलो दाग र ध‘ब्बा देखिन्छ भने सावधान भइहाल्नुहोस्। किनकि शरीरमा आउने कुनै पनि परिवर्तनले तपाईंको नराम्रो स्वास्थ्य अवस्थालाई संकेत गरिरहेको हुन्छ।चिकित्सकहरुका अनुसार शरीरमा देखिने निलो दाग हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था बिग्रन लानेको अवस्था हो ।
हेर्नुहोस् शरीरमा देखिने निलो दागका कारणहरु :
आम रुपमा छालामा चो’ट लाग्दा यस्तो दागहरु देखिन्छ । कहिलेकाँही तपाईंको आफ्नै शरीरको भागले पनि अर्को भाग थिच्चिने अवस्था हुन्छ । यस्तै कुनै बस्तुसँग ठ’क्कर खाँदा पनि यस्तो चो’ट लाग्न सक्छ।यसरी चो’ट लाग्दा शरीरका रक्त धमनिमा असर पुग्न जान्छ, जसका कारण शरीरमा निलो दाग देखिन्छ।
रगत जम्न र रगतका धमिनिमा लाग्ने चो’टहरु भर्नका लागि हाम्रो शरीरलाई केही भिटामिन र मिनरलको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसकारण तपाईंले खानामा यस्तो भिटामिन र मिनरल प्राप्त हुने चिजहरु समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।जस्तै भिटामिन ‘के’ले रगत जम्न मद्दत गर्छ भने भिटामिन ‘सी’ले त्वचा र रक्त धमनिमा चो’ट लाग्नबाट बचाउँछ । यस्तै जिंक र आइरनजस्ता मिनरलले चो’टलाई छिट्टै निको पार्न मद्दत गर्छन् ।